12 qorshe oo loogu talagalay lammaanaha da'da yar | Ragga Stylish
Qorshayaasha u dhexeeya lamaanayaasha dhallintayar waxaan kuu soo jeedinaynaa adiga fikradaha ugu qosolka iyo jacaylka badan sidaa darteed waxaad ku qaadan kartaa fasax yar, dabaaldeg yar ama isbuuc dhammaad jaceyl ah si aad si fiican isku barataan.
Qorshooyinka u dhexeeya lamaanaha da'da yar maahan inay noqdaan caajis, waxa muhiimka ahi waa ku raaxeysiga, laakiin iyada oo aan lagu dhicin isku dayga ah in marwalba sidaas oo kale la sameeyo oo laga dhigo monotonous. Wax walba waxay ku xirnaan doonaan xaddidnaanta meesha aad ku nooshahay, maxaa yeelay qof kastaa kuma noola magaalooyinka, laakiin sidoo kale waxay ku xirnaan doontaa ujeeddooyinka la tixgelinayo Oo haddaan leenahay liisanka darawalnimada, qorshayaashu way sii xoroobi karaan.
1 Qorshayaasha Lamaanayaasha Dhallintayar
1.1 1-Galab Filim shaneemo
1.2 2 - Samee aqoon isweydaarsi hal abuur leh
1.3 3- Tag riwaayad muusig
1.4 4 - Maalin ama galab oo lagu ciyaaro guriga
1.5 5 - Maalin ku qaad dalka
1.6 6 - Isbuuc fasax jaceyl ah
1.7 7 - Wada karinta
1.8 8 - Tag Dukaameysiga
1.9 9 - Dalxiis ku tag deegaankaaga
1.10 10 - Qaado galab filim ama silsilad ah
1.11 11 - Ku soo biir isboorti
1.12 12 - Dalxiis ku samee matxafyada
Qorshayaasha Lamaanayaasha Dhallintayar
Liistadeena gudaheeda waa inaad ku dhejisid shucuur iyo xamaasad dhammaan qorshooyinkaaga. Waa inaad jebisaa jadwalka iyo khibradaha daqiiqadaha, si aad u ogaato damacyada cusub oo aad u ogaatid dhadhankaaga si aad u fiican:
1-Galab Filim shaneemo
Aadida shaleemada iyo daawashada filim shaashadda weyn waa wax wali nala yaab leh. Ku raaxeysiga filim weyn ayaa noo fureysa dareemo waaweyn cunida saloona waa wax uu jecelyahay. Markaad shineemada ka baxdo waxaad aadi kartaa cashada fudud ee lamaanaha ah.
2 - Samee aqoon isweydaarsi hal abuur leh
Haddii magaaladaadu leedahay dhaqdhaqaaqyo aad si xor ah isaga diiwaan gelin karto, waxaad dooran kartaa qorshe aad ku wadaagi karto xoogaa aqoon ah. Aqoon isweydaarsi cunto karinta, farshaxanno ama aqoon isweydaarsi ah oo leh qoob ka ciyaarka ayaa ka duwanaan doona waxqabadyo hal abuur leh sida aad u maleyn karto.
3- Tag riwaayad muusig
Ayadoo lagu gudajiro ajandaha dhaqameed ee gobolkaaga waad awoodaa hubi riwaayadaha laga yaabo inay ka dhacaan aaggaaga. Haddii aadan waxba ku arki karin meeshaada, internetka waxaad ku weydiin kartaa su'aalahaaga magaalooyinka kuugu dhow, had iyo jeer waxaa jira riwaayado noocyo badan leh oo lagu raaxeysto shirkad wanaagsan.
4 - Maalin ama galab oo lagu ciyaaro guriga
Haddii waqtiga uusan dhicin waad awoodaa wali ku raaxee ciyaarahaas dhaqameed guriga. Ciyaaraha guddiga wali waa kuwa ugu cadcad, ciyaaraha kaararka caadiga ah ama sameynta xujo weyn waxay noqon kartaa wax badan oo xiiso leh.
5 - Maalin ku qaad dalka
Waxay noqon kartaa U diyaari dalxiis yar qayb ka mid ah magaaladaada halkaas oo aad ka heli karto webi ama aag wanaagsan oo leh geedo halkaas oo loo qoondeeyay inay maalintaas ku bixi karto duurka. Haddii aad ikhtiyaar u leedahay inaad aado xeebta, sidoo kale waxay ku dhacaysaa qaabkan beddelka ah.
6 - Isbuuc fasax jaceyl ah
Waad qorsheyn kartaa inaad u baxdo magaalo qurux badan, ama in yar oo kaabiga ah khariidada, marwalba iskiis u taagan ama leh baakado gaar ah diyaar u ah lamaanaha. Xirmooyinkaan waxaad horey ujoogtey hoteelka, inbadan oo kamid ah isboortiga, oo qadada ama cashada lagu daro iyo qiimaha horeyba loogu calaamadeeyay.
7 - Wada karinta
Haddaad awoodid haysashada meel aad wax ku karsatid waa ikhtiyaar wanaagsanny aad u hal abuur leh Cunto macaan ama casho macaan ayaa qayb ka noqon kara qorshahaaga inaad miiska saarto taabashadaada aqoonta cilladda caloosha.
8 - Tag Dukaameysiga
Had iyo jeer jeclaan fikradda ah u bax si aad u eegto dukaamada soo jiidashada leh. Waxaan ku socon karnaa waddooyinka hal maalin annagoo la soconna dharkeenna soo jireenka ah iyo bakhaarrada qurxinta ama isku dayidda meel kale. Xulashada xarumaha wax iibsiga sidoo kale way soo gali karaan Liistadeena gudaheeda, meelahan waxaan mar walba ku haynaa liis dheer oo maqaal ah oo ku yaal fartayada.
9 - Dalxiis ku tag deegaankaaga
Waxay ku saabsan tahay booqashada dalxiis ee meesha aad ku nooshahay, adoo xoogga saaraya helitaanka meelahaas aadan aqoon. Waad dooran kartaa subaxnimo waxaadna ku dhamaysan kartaa qasbaado baarka aad jeceshahay ka dibna maalintaas waxaad ku dhammayn kartaa socod deggan oo deggan.
10 - Qaado galab filim ama silsilad ah
Haddii aad heli karto meel aad ku degto oo ku nasato doorashadani waa mid jaceyl badan, gaar ahaan maalmahaas marka ay qabowdo oo aad jeceshahay in laguu nuugo. Marathon taxane ah haddii lagugu xiro waa madadaalo iyo baashaal. Haddii, dhinaca kale, aad jeceshahay filimada, waad arki kartaa xulashooyinkayaga ah filimada argagaxa o Filimaan.
11 - Ku soo biir isboorti
Waad iska diiwaan gelin kartaa galab waali ah oo leh waxqabadyo isboorti ah oo loo sameeyo sidii lamaane. Baaskiil u raac, adigoo ku dhex lugeynaya hareeraha magaaladaada ama booqo kaynta qurxoon, iskeeti sibidhka ama galabtii barkadda. Madadaalo mooyee, waxaad isku daraysaa wax faa'iido u leh caafimaadkaaga, marka lagu daro waad ku dari kartaa jadwalkaaga caadiga ah si aad uga sii caafimaad badan.
12 - Dalxiis ku samee matxafyada
Dad badan ayaa ku nool magaalooyin mana yaqaaniin waxyaabaha kale ee lagu beddeli karo ee ka jira degaankooda. Waxaa jira matxafyo aan tiro lahayn oo aan ku haysan karno farahayaga oo aan booqan karno. Waxaad ku ogaataa ajendayaasha dhaqameed ee aagga aad rabto inaad booqato oo aad ku raaxaysato dhammaan qaybta taariikhiga ah ee aadan aqoon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » 12 qorshe oo loogu talagalay lammaanaha da'da yar